Inkqubo yokugcwalisa ipompo yePeristaltic - China Inkqubo yokugcwalisa ipompo yePeristaltic, abaXhasi
Ukuzaliswa koomatshini okuzenzekelayo Iimpawu zeMveliso GZ100-3A yinkqubo yokugcwalisa ipompo ye-peristaltic kunye nomlawuli kunye nomsebenzi wolawulo okrelekrele ngokuzimeleyo okuphuhliswe yinkampani yethu. Inkqubo yokugcwalisa ineeseti ezi-4 zeeyunithi ezisisiseko zokuqhuba, ezinokwandiswa ukuya kuthi ga kumajelo angama-32; Uthotho lwe-YZ kunye neentloko zempompo ze-DMD15 zingafakelwa ukubonelela abathengi ngeendlela ezahlukeneyo. Umlawuli usebenzisa i-intshi ye-7 intshi yokuthinta isikrini ukubonisa ngokucacileyo umxholo womsebenzi kumthengi. Ndihamba ...
Ipharamitha yobuchwephesha Uluhlu lokugcwalisa: 1ml-100ml Uluhlu lwexesha lokugcwalisa: 0.5-30s Isantya seemoto: 1-600rpm Uluhlu lwesantya: Bala ngokuzenzekelayo ngokwenani kunye nexesha lokugcwaliswa. Ukubuya kweAngle ebuyayo: 0-360 ° Ukulinganisa: beka ivolumu eyiyo kwimpompo, inokwenza ulungiso ngokuzenzekelayo. Lungisa isixa sesisombululo kwi-Intanethi: Abasebenzisi banokuhlengahlengisa isixa sesisombululo kunye neepesenti kwi-Intanethi yokuQala / yokuyeka ukuyeka: abafowunelwa igalelo (bayeke-bazalise xa kunqongophele iibhotile) Umsebenzi weMemori: Re ...
Ipharamitha yobuchwephesha Uluhlu lwevolumu yokugcwalisa: 0.1ml-30ml Uluhlu lwexesha lokugcwalisa: 0.5—30s Uluhlu lwesantya: Bala ngokuzenzekelayo ngokwenani kunye nexesha lokugcwaliswa. Ukubuyisela iAngle ebuyayo: 0-1000 ° Uluhlu lwesantya sokuhlamba i-Tubing: Ukuhlamba i-Tubing kunye nokuzaliswa kwangaphambili, i-15-350 rpm (13 #, 14 #, 19 #, 16 #) yenza ulungelelwaniso ngokuzenzekelayo. Lungisa isixa sesisombululo kwi-Intanethi: Abasebenzisi banokuhlengahlengisa isixa sesisombululo kunye neepesenti yenani le-intanethi ...